आन्द्रेले भारतसँगको सिरिज गुमाउने, उनको स्थानमा कसले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
आन्द्रेले भारतसँगको सिरिज गुमाउने, उनको स्थानमा कसले पाए मौका?
काठमाडौं, साउन १७ । वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेलले शनिबारदेखि सुरु हुने भारत विरुद्धको टि–२० सिरिज गुमाउने भएका छन् । उनी पूर्णरुपमा स्वस्थ नभएकाले आन्द्रेले भारतसँगको पहिलो ३ खेलकाे टि–२० सिरिज गुमाउने हुन् । उनको स्थानमा जसन मोहम्मदले टिममा मौका पाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस श्रीलंकासँगको टी–२० सिरिजका लागि वेष्ट इन्डिजद्वारा टोली घोषणा
आन्द्रे हालै इंग्ल्याण्ड र वेल्समा सकिएको विश्वकप घाइते भएका थिए । वेस्ट इन्डिजले भोलि (शनिबार) देखि तीन टि–२०, तीन वान डे र २ खेलको टेस्ट सिरिज खेल्दै छ । टि–२० मा वेस्ट इन्डिजले कार्लोस बर्थवेटको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय टिम घोषणा गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतलाई पहिलो झड्का, धवन क्लिन बोल्ड
वेस्ट इन्डिजको टोलीः कार्लोस ब्रार्थवेट (कप्तान) जन क्याम्बील, इभन लुइस, शिमरन हिटमायर, निकोलस पूरन, किरण पोलार्ड, रमन पावेल, कीमो पल, सुनील नारायाण, शेल्डन कट्रेल, ओशाने थमस, एन्थोनी ब्रिम्ले, जसन मोहम्मद र खैरी पिर्रे ।
ट्याग्स: आन्द्रे रसेल, टि–२० सिरिज, वेस्ट इन्डिज